पागलपन | USAHello | USAHello
पागलपन एक मानसिक रोग गम्भीर छ. यो तपाईं विश्व हेर्नुहोस् बाटो र व्यवहार बाटो असर.
पागलपन एक मानसिक रोग आफ्नो विचार परिवर्तन र तपाईं कसरी संसारको हेर्न छ. यसको लागि तपाईं नियन्त्रणमा आफ्नो विचार राख्न पागलपन गाह्रो बनाउँछ बनाउँछ. तपाईं आफ्नो विचार र भावना परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं पागलपन छ भने कसरी व्यवहार गर्न. तिनीहरूले जवान शिजोफ्रेनिक हुँदा अधिकांश मानिसहरू प्राप्त.
तपाईं पागलपन छ भने तपाईँले स्वामित्व परिवर्तन केही रोग हो:
तपाईं यसलाई राम्रो तरिकाले छैन केहि वास्तविक हो भनेर सोच्न गर्दा Illusions छ. उदाहरणका लागि, तपाईँले आफ्नो व्यवसाय सबैलाई तपाईं निकाल्नु गर्न प्रयास छ लाग्छ र तपाईं घृणा. यो तपाईँलाई भयातुर वा रिस बनाउन सक्छ. सत्य मान्छे प्रेम र कुनै एक तपाईं निकाल्नु गर्न प्रयास गर्दै छ भन्ने हो भने यो delusional छ.
कुरा उत्पन्न बेला विभ्रम सामना गर्दै. कुनै एक छ जब उदाहरणका लागि, तपाईं ध्वनि सुन्न सक्नुहुन्छ. तपाईं भन्ने छैन कुराहरू देख्न सक्छन्. तपाईं स्वाद वा नभएका कुराहरू गंध गर्न सक्नुहुन्छ. यी अनुभवहरू लागि धेरै वास्तविक हो.
आफ्नो भावना देखाउन बेला भावना धमिलो छन्. तपाईं अब उप्रान्त आँखा मानिसहरू हेर्न सक्छ. तिमी धेरै बिस्तारै र भावना बिना बोल्न सक्छ. के तपाईं वरिपरि जाँदै छ तपाईं सजग छन् भने भावना धमिलो हेर्न सक्छन्. तपाईं कि स्थिति सामान्य भावना छैन भावना देखाउन सक्छौं. उदाहरणका लागि, आफ्नो मित्र धेरै दुःखी कथा बताउँछ. तपाईं आफ्नो मित्र दुःख को हदसम्म बुझ्दैनन् र हाँस्न.
प्रेरणा को हानि
तपाईं केहि गर्न ऊर्जा नभएको बेला प्रेरणा को हानि छ. तपाईं नुहाउनु चाहँदैनन् वा तपाईं आफ्नो दाँत सफा.
पागलपन संग केही मानिसहरू आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई वरिपरि हुन चाहँदैनन्.
पागलपन धेरै कुराहरू कारण हुन सक्छ. तपाईं पागलपन हुन सक्छ कि कारणहरू छन्:
जीन को मानसिक र शारीरिक लक्षण हो (यस्तो आँखाको रंग रूपमा) तपाईं आफ्नो आमाबाबुबाट प्राप्त. शायद आफ्नो परिवार मा कसैले पागलपन छ.
जैव रसायन आफ्नो शरीर काममा विभिन्न रसायन छ.
जीवन घटनाहरू र आघात मानसिक रोग हुन सक्छ सक्नुहुन्छ.
जैविक यसलाई आफ्नो शरीर को भाग हो मतलब. तपाईं सजिलो चोट शिजोफ्रेनिक बनाउन सक्छ आफ्नो मस्तिष्क मा परिवर्तन हुन सक्छ. पागलपन मानिसहरूलाई थप susceptible.
लागूऔषधको धेरै प्रयोग पागलपन हुन सक्छ.
अधिकांश मानिसहरू बीच पागलपन को लक्षण ग्रस्त 16 र 30 वर्ष. लक्षण तपाईं रोग कारण छ कि भावना र परिवर्तन हो. पछि पागलपन संग मान्छे को धेरै प्राप्त छैन 45 वर्ष. यो सम्भव छैन पागलपन उपचार मात्र उपचार गर्न छ. तपाईं आफ्नो डाक्टर निर्धारित को चिकित्सा लिन आवश्यक हुनेछ.
मानसिक स्वास्थ्य कस्तो छ?
मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सहयोग कसरी पाउन
USAHello गर्न दान द्वारा, you support the technology and education that help newcomers succeed in the USA.